Luke Shaw oo ka hadlay dhibaatada Jadon Sancho ku heysata Kooxda Manchester United | Dalkaan.com
Home ciyaaraha Luke Shaw oo ka hadlay dhibaatada Jadon Sancho ku heysata Kooxda Manchester...
Luke Shaw oo ka hadlay dhibaatada Jadon Sancho ku heysata Kooxda Manchester United
Daafaca dambeedka midig ee kooxda Manchester United Luke Shaw ayaa ku adkeystay inuusan “shaki ku jirin” in saaxiibkiis Jadon Sancho uu awoodi doono inuu muujiyo inuu u qalmo lacagta laga soo bixiyay ee £ 72m.
Ciyaaryahanka heerka caalami ee dalka England ayaa Red Devils ku soo biiray xagaagan isagoo ka yimid Borussia Dortmund , laakiin ilaa iyo haatan wuxuu ku guuldareystay inuu diiwaan geliyo hal gool ama caawin kooxda.
Sancho si joogto ah ugama uusan dhex ciyaarin Ole Gunnar Solskjaer shaxdiisa waxaana xitaa Gareth Southgate qirtay inuusan ku soo darin kooxdiisii ​​ugu dambeysay oo ku saleysan qaab ciyaareedkiisa .
“Mararka qaarkood, dadka, waqti ayay ku qaadataa. Laakiin ma dhihi karo wuu dhibtoonayaa hadda,” Shaw ayaa u sheegay talkSPORT .
“Aad ayuu u shaqeynayaa runtii aad ayuu u fiican yahay wuxuuna u muuqdaa mid soo kabsan kara.
“Laakiin shaki igama jiro maskaxdayda, way soo socotaa, hibada uu leeyahay waa wax aan la rumaysan karin, si toos ah ayuu u aadi karaa meesha ugu sarreysa. Waxay ku saabsan tahay uun inuu diirada saaro, sii wado waxa uu samaynayo tababarka iyo inuu si adag u shaqeeyo. waqti ayaa iman doona. ”
Labada nin ayaa labadoodaba laga yaabaa inay si wadajir ah u wada ciyaaraan sabtida marka England ay la ciyaari doonto Andorra ciyaartii ugu dambeysay ee isreebreebka Koobka Adduunka 2022.
Previous articleWararka Suuqa Caawa: PSG oo u dhaqaaqeysa Xidiga Mohamed Salah, Sheekada Raheem Sterling iyo Qodobo kale
Next articleWar Rasmi ah: Sacuudiga oo dhameestiray iibsashada Kooxda Newcastle United